Ipa e-YeVashanyi Mavhiza muIndia Zvino Inokurudzira Aimbova IATO Mutungamiri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Ipa e-YeVashanyi Mavhiza muIndia Zvino Inokurudzira Aimbova IATO Mutungamiri
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • wedzero • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Mufambi uye Tourism mutungamiri Subhash Goyal, Sachigaro weboka re STIC uye aimbova Mutungamiriri weIndia Association of Tour Operators (IATO), anoti nyika inoda kutanga pakarepo kubvumidza e-Tourist Visa muIndia uye kuronga ndege dzenyika dzese mumwedzi waGunyana uye Gumiguru kutanga kudzoreredza chikamu.
COVID ichagara, uye isu tinofanirwa kudzidza kugara nayo, anodaro Goyal.
Ruzhinji rwevashanyi veIndia vanouya pakati paGumiguru naKurume, saka, mwaka unouya uyu wakakosha zvakanyanya.
Zviuru zvevamiriri vekufamba nevashanyi vashanyi vakatoparara. Iyo chete tariro yekupona kutanga kwe e-vashanyi vhiza uye yakarongwa nyika dzese.
Goyal akaenderera achiti:
Tinofanira kuzadzisa zviroto zveMutungamiriri wedu zvekuita India hupfumi hwemadhora zviuru zvishanu. Tourism ndiyo yega indasitiri inova inoda vashandi uye ine mhedzisiro yekuwedzera hupfumi. Naizvozvo, isu tinofanirwa kutora matanho izvozvi zvisati zvanyanyisa.
Mwaka wevashanyi weIndia uri kubva Gumiguru kusvika Kurume uye isu hatifanire kurasikirwa nemukana uyu mugore ra2021 kubvira gore 2020 yaive yakashambidzwa zvachose.
Mu2019, India yakawana maRs. 2,10,981 macrores Kunze Kunze kubva panguva yaNdira kusvika Zvita kana US $ 3.1 bhiriyoni mumwedzi waZvita 2019 (sosi MOT). Nyika yakagamuchira vanopfuura mamirioni gumi vashanyi muna 10.
International Tourism inoratidzira angangoita gumi muzana yeIndia GDP uye ingangoita 10 muzana yemitero yakananga uye isina kunangana. Kugamuchira vaeni uye indasitiri yekushanya inoshandisa vanhu vangangosvika mamirioni makumi mashanu nemasere nemashanu uye vanhu vangangoita mamirioni makumi manomwe neshanu zvisina kunangana muIndia. Vanenge mamirioni gumi vanhu vakarasikirwa nemabasa avo kana vari pazororo vasina mubhadharo.